Jakobho 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba yaJakobho 1:1-27
Kutsungirira kunounza mufaro (2-15)
Kutenda kwakaedzwa (3)
Ramba uchikumbira uine kutenda (5-8)
Ruchiva runobereka chivi nerufu (14, 15)
Zvipo zvese zvakanaka zvinobva kumusoro (16-18)
Kunzwa shoko nekuita (19-25)
Munhu anotarisa mugirazi (23, 24)
Kunamata kwakachena uye kusina kusviba (26, 27)
1 Ini Jakobho,+ muranda waMwari uye waShe Jesu Kristu, ndinoti kumadzinza 12 akapararira kwese kwese: Kwaziwai! 2 Hama dzangu, pamunosangana nemiedzo yakasiyana-siyana, farai kwazvo,+ 3 sezvo muchiziva kuti kutenda kwenyu uku kwakaedzwa kunoita kuti mutsungirire.+ 4 Asi kutsungirira ngakupedze basa rakwo, kuti muve vakakwana uye vakanaka pazvinhu zvese, pasina chamusina.+ 5 Saka kana mumwe wenyu asina uchenjeri, ngaarambe achikumbira Mwari+ uye achahupiwa,+ nekuti iye anopa munhu wese nemwoyo wese, asingazvidzi.*+ 6 Asi ngaarambe achikumbira aine kutenda+ uye aine chivimbo chizere,+ nekuti munhu asina chivimbo akafanana nefungu regungwa rinofambiswa nemhepo richisairirwa kwese kwese. 7 Chokwadi, munhu iyeye ngaarege kutarisira kuti ane chaachapiwa naJehovha.* 8 Munhu iyeye ane mwoyo miviri+ uye haana kutsiga pane zvese zvaanoita. 9 Asi hama yakaderera ngaipembere nemufaro pamusoro pekukwidziridzwa kwayo,+ 10 uye mupfumi ngaapembere nekuti ava panzvimbo yepasi,+ nekuti achaparara seruva remusango. 11 Sezvinoita zuva rinobuda richipisa rosvavisa zvinomera, maruva azvo odonha, zvosara zvisingayevedzi, mupfumi achapararawo ari mushishi kutsvaga pfuma.+ 12 Anofara munhu anoramba achitsungirira muedzo,+ nekuti paanokunda achapiwa korona yeupenyu,+ yakavimbiswa naJehovha* kune vaya vanoramba vachimuda.+ 13 Munhu paanenge achiedzwa ngaarege kuti: “Ndiri kuedzwa naMwari.” Nekuti hapana angaedza Mwari nezvinhu zvakaipa, uye iye haaedzi munhu. 14 Asi mumwe nemumwe anoedzwa paanotorwa mwoyo, oputirwa neruchiva rwake.*+ 15 Ruchiva parunenge rwakura,* runobva rwabereka chivi; chiviwo pachinenge chaitwa, chinokonzera rufu.+ 16 Musatsauswa, hama dzangu dzinodiwa. 17 Zvipo zvese zvakanaka nezvipo zvese zvakakwana zvinobva kumusoro,+ kuna Baba vezviedza zvekudenga avo vasingachinji,+ vakasiyana nemumvuri unochinja.+ 18 Nekuti ndizvo zvaaida, akaita kuti tiberekwe neshoko rake rechokwadi,+ kuti tive imwe mhando yezvibereko zvekutanga pazvisikwa zvake.+ 19 Zivai izvi hama dzangu dzinodiwa: Munhu wese anofanira kukurumidza kuteerera, kunonoka kutaura,+ uye kunonoka kutsamwa,+ 20 nekuti kutsamwa kwemunhu hakuiti kuti pave nekururama kunodiwa naMwari.+ 21 Saka bvisai zvese zvisina kuchena nekanhu kese kakaipa,*+ uye bvumai neunyoro kusimwa kweshoko rinokwanisa kukuponesai.* 22 Ivai vaiti veshoko kwete vanzwi chete,+ muchizvinyengera nezvinhu zvenhema. 23 Nekuti kana munhu achingonzwa shoko asingariiti,+ akafanana nemunhu anotarisa chiso chake mugirazi. 24 Nekuti anozvitarisa, oenda, obva atokanganwa kuti iye munhu akaita sei. 25 Asi munhu anonyatsotarisa mumutemo wakakwana werusununguko,+ asingausiyi, achafara pane zvaanoita; haana kuva munzwi anokanganwa, asi aita zvaanzwa.+ 26 Kana munhu achifunga kuti ari kunamata Mwari asi asingadzori rurimi rwake zvakasimba,*+ ari kunyengera mwoyo wake, uye kunamata kwake hakuna zvakunobatsira. 27 Kunamata kwakachena uye kusina kusviba kuna Mwari wedu uye Baba vedu ndeuku: kuchengeta nherera+ nechirikadzi+ pakutambudzika kwadzo,+ uye kuramba usina kusvibiswa nenyika.+
^ Kana kuti “asingapi mhosva.”
^ Kana kuti “ruchiva rwake rwomukwezva sehwambo.”
^ ChiGir., “rwabata pamuviri.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nezvakaipa zvizhinji.”
^ Kana kuti “kuponesa mweya yenyu.”
^ Kana kuti “asingaisi matomu parurimi rwake.”